Qarax Khasaare weyn geystay oo ka dhacay Muqdisho iyo Raysal wasaaraha oo ka badbaaday | FooreNews
Home wararka Qarax Khasaare weyn geystay oo ka dhacay Muqdisho iyo Raysal wasaaraha oo ka badbaaday
Qarax Khasaare weyn geystay oo ka dhacay Muqdisho iyo Raysal wasaaraha oo ka badbaaday
Muqdisho(Foore)- Qarax sababay dhimsho iyo dhaawaca fara badan ayaa maanta ka dhacay Golaha Murtida iyo madadaaalada ee Muqdisho oo ay ka socotay Xaflad lagu xusayay sannad-guuraddii koowaad ee ka soo wareegtay markii dib loo hawl-geliyay Telefishinka dawladda taagta daran ee dalka qalalaasuhu hadheeyay ee Soomaaliya.
Weerarkan ayaa la sheegay inay fulisay haweeney isku soo xidhay waxyaabaha qarxa, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in qaraxa uu ahaa mid ka dhacay gudaha tiyaatarka siday faafisay shabakada Hiiraan oo aanu warkan ka soo xigaanay, waxaana xilligaas goobta ku sugnaa xubno fara badan oo uu ka mid ahaa ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, C/weli Maxamed Cali. Sidoo kale waxaa goobta ku sugnaa wasirro, xildhibaanno iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda itaalka daran ee Soomaaliya.
Qaraxa ayaa wuxuu dhacay xilli uu Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya khudbad jeedinayay, iyadoo aanay jirin wax gaadhay ra’iisul waasaraha Soomaaliya. Laakiin waxaa ku dhaawacmay xubno uu ka mid yahay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo laba Wasiir oo kala ah Wasiirka qorsheynta iyo xidhiidhka caalamiga ah, C/llaahi Goodax Barre iyo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, C/wahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif.
Dadka ku dhintay qaraxa ayaa waxay tiradoodu gaadhaysaa lix qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen tiro ka badan 20-qof oo ay ku jiraan toddoba suxufi oo tabinayay xafladda, waxaana dadka dhaawacmay ay intooda badan ahaayeen shacab.
“Mar qudha ayaa waxaa dhacay qarax weyn, waxaan arkay dad badan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo goobta daadsan,” ayuu yidhi mid ka mid ah dadkii goobta ku sugnaa oo weli ku jira xarunta gudaheeda, isagoo sheegay in weerarka uu ahaa mid dayaankiisu weynaa. Dadkii goobta ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha xidhiidhka Soomaaliyeed ee kubadda Cagta, Siciid Maxamuud Nuur (Mugaambe) iyo guddomiyaha guddiga olaymbikada Soomaaliyeed, Aadan Xaaji Yabarow (Wiish).
Baabuurta gargaarka deg-degg ah ee Ambalaasta oo dhaawacyo fara badan wada ayaa buuxiyay jidadka Muqdisho, waxaana dhaawacyada ka dhigayaa isbitaallada Muqdisho oo uu ka mid yahay Cisbitaalka weyn ee Madiina.
Ciidamada ilaalada madaxda dowladda KMG ah ee ku sugnaa golaha murtida iyo madadaalada iyo kuwa tiyaatarka ayaa waxay fureen rasaas badan, iyadoo goobta oo dhan ay xalaaddeedu noqotay mid kacsan. Sidoo kale, waxaa ku dhaawacmay wariyeyaal ka mid ah kuwa ka shaqeeya Muqdisho oo goobta ku sugnaa.
Previous PostD/Hoose Hargeysa oo Shirkadda Dhis Ka wareejisay khashin ururintii Gacan-libaax iyo 26 June Next PostWasiirka Qorshaynta oo aqoon isweydaarsi u soo gabo-gabeeyay Shaqaalaha Ha’yadaha dawliga ah